नगरकै नमुना वडा बनाउछु । वडा अध्क्ष्य उम्मेदवार थापा मगर - Brizikhabar
नगरकै नमुना वडा बनाउछु । वडा अध्क्ष्य उम्मेदवार थापा मगर
१३ असार २०७४, मंगलवार ०२:३५ June 27, 2017 Brizi Khabar	0 Comments
वि.सं २०३८ साल लम्जुङ मा जन्मिनु भएका राम बहादुर थापा मगर सिद्धार्थनगर वडा नम्बर ६ कीशोरपुर का स्थानिय बासिन्दा हुन । सिद्धार्थनगरमा सामाजिक संघसंस्थामा काम गर्न पछि नहट्ने थापा मगर २०६८ देखी २०७१ सम्म गाउँ समाजको सचिव पदमा रही काम गर्नु भएको थियो । २०७० साल देखी यातायात ब्यवसायमा लाग्नु भएका थापा समाज सेवाको काममा निकै सक्रिय रुपमा लाग्ने युवा जुझारु तथा सहयोगीको रुपमा पनि चिनिन्छन । जागिरको सिलसिलामा विभिन्न देश विदेश पनि घुम्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएका थापा ले बिकास निर्माणको राम्रो अनुभब बटल्नु भएको छ। वडा मा स्थानिय निकायको निर्वाचन को उम्मेदवार छनौट गर्ने सन्दर्भमा थापा आफनो गाउँ समाजको पहलमा नै वार्डको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनु भएको हो । अत्यन्तै मिजासिलो र स्पस्ट बक्ता थापा राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी को क्षेत्रिय सदस्य हुन। पार्टी मा सकृयरुपमा लागेका थापा लाई स्थानिय पार्टी शुभचिन्तक को जोडबलमा थापा ले वडा अध्क्षय को टिकट पाउन सफल भएका हुन । यसै स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर चुनावी एजेण्डा, विकासका योजना र प्रतिबद्धताका बारेमा ब्रिजिखबर डट कमका श्रीजना पून सँगको कुराकानीः
तपाई राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सिद्धार्थनगर वडा नम्बर ६, वडा अध्क्षयको उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ ? तपाईको उम्मेदवारी किन ?
प्रश्नको लागि धन्यवाद। पहिलो कुरो त! स्थानिय तह मा नै भएको भ्रस्टचारको अन्त्य हो । अरु दलले यो मुद्धा लाई छाया मा राखेका छन, हामीले यसलाई प्रमुख एजेण्डा नै बनाएका छम ।
यती भन्दैमा वडाको बिकास हुन्छ त ?
म धेरै बोल्ने भन्दा काम गर्ने मान्छे हुँं । त्यसमा अझ भन्नुपर्दा युवा नेत्रुत्व को लागि पनि हो । म सँग युवा जोश जागर र त्यही अनुसार को कार्य योजना पनि बनाएको छु । पछि परेका तथा पिछडीएको समुदायहरु, महिलाहरु, युवाहरुको विकासको लागि के कस्तो ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ, भन्ने मलाई थाहा छ । अहिले सम्म वडा मा बिकासको पहुँच पुग्न सकेका छैनन, बाटो-घाटो ढल निकास, बिजुली पानी जस्ता पूर्ण रुपमा बन्न सकेका छैनन। यस वडाको विकासका लागि युवाहरुको खाँचो छ । त्यसैले मैले यस नगरको वडा अध्क्षय पदको उम्मेदवारी दिएको हुँ। म सम्रिद्ध वडा को बिकास र सुशान ब्यबस्था निर्माण गर्छु ।
तपाईंले यस सिद्धार्थनगर को वडा विकासको लागि कस्ता योजनाहरु बनाउनु भएको छ ?
हामीले इमान्दारिताका साथ २३ बुदे स्थानिय घोषणा पत्र सार्वजनिक पनि गरी सकेका छौ । पार्टीको केन्द्रिय प्रतिबद्धता पनि जनता लाई दिएका छौ । बिशेष गरी स्थानिय तह मा नै भ्रस्टचारमुक्त प्रशान निर्माण गर्ने हो। साथै स्वाथ्य, शिक्षा र रोजगार, गास, बासको व्यवस्था प्राथमिकता रहेको छ । बाटो, ढलनिकास र स्वच्छ हराभरा वडा बनाउन हामी प्रतिबद्धछौं ।
चुनाव जितेपछि योजनाहरु पूरा गर्नृहुन्छ ? कि चुनाव जित्नको लागि मात्रै हो ?
यो मेरो उम्मेदवारी जित्नको लागि मात्र होइन । वडाको विकास गर्नको लागि हो । म एक युवा हुँ, मैले अघी पनि भने, मैले बोलेर चुनाव जित्नको लागि नभएर काम गरेर देखाउने र जति पनि वडा विकासका योजना छन् ति सबै पूरा गर्नेछु । त्यसैले जित्नको लागि होइन काम गर्नको लागि हो।
वडाबासीलाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?
मैले यस वडा मा भएका समस्या लाई नजिक बाट नियालेको छु । वडाबासीहरु को समस्या नै मेरो समस्या हो भन्ने कुरा मैले राम्री बुझेको छु । वडाबासिहरु लाई प्रत्क्षय भेटेको छु, उहा हरुको सुझाब सल्लाह र समस्यालाई हृदय गमन गरेको छु । वडाबासिहरुको विश्वाश र मायालाई सिरोपर गरी घरदैलो अभियान मा तिब्ररुप मा जुटेको छु । विगतमा मैले सामाजिक सघंसंस्थामा गरेको कार्यलाई हेरेर विश्वास गर्नुहुन्छ। मैले वडाबासी हरु बाट पूर्ण समर्थन पाएको छु । मेरो युवा जोशजागर र इमान्दारिता देखेर नै मलाई वडा बासी हरुले उम्मेदवार उठाउनु भएको हो । मलाई जिताउनुहोस्, मैले समाजमा काम गरेर देखाउँछु ।
भनेपछि तपाईको जित सुनिश्चित छ ?
सुनिश्चित छ । एकपटक विश्वास गरेर हेर्नुहोस्, म भोट खेरा फाल्दिन । युवा जोसजागँर इमान्दारितालाई पनि हेर्नुहोस्। तसर्थ हाम्रो पार्टीको प्यानललाई जिताउनुहोस् । हामीले हाम्रो क्षमतालाई सहि सदुपयोग गरी समाजमा देखाउनेछौँ । नगरकै नमुना वडा बनाउने लक्ष्य छ । साथ दिनुहोस्।
अन्त्यमा वडाबासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हाम्रो पार्टीले प्रत्यक वडा मा महिला लाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । जुझारु कर्मठ तथा इमान्दारिता व्यक्तिलाई मेयर तथा उपमेयर मा उठाएको छ । सिद्धार्थनगरका वडाबासीले हामीलाई भोट गरेर जिताउनुहोस्, हामी नगरकै नमुना वडा बनाएर देखाउछौ । सबै को पहुँच हुने गरी सुशान को ब्यबस्था गर्ने छौ । त्यसैले जनमुक्ति पार्टी को चुनाव चिन्ह घर मा भोट हाली विजयी बनाउन अनुरोध गर्दछु ।
← नगरमा नै नमुना वडा बनाउछु । नन्दा गुरुङ वडा अध्क्षय पदको उम्मेद्वार ।
नेपालको सन्दर्भमा संघीय राष्ट्रवाद →
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी तिलोत्तमा नगर समिती वडा नंम्बर १५-१६ मा साइकल र्याली सम्पन्न ।
२६ बैशाख २०७४, मंगलवार ०३:५६ Brizi Khabar 0
लाङघाली एकता समाज कावासोति ८ द्धारा क्यान्सर पिडीत थापालाइ सहयोग प्रदान
१० भाद्र २०७५, आईतवार ०३:०८ Brizi Khabar 0
भष्टाचारी देश द्रोही हुन जनमुक्ति युवा महासंघ
२८ मंसिर २०७५, शुक्रबार ०३:३५ Brizi Khabar 0